Madheshvani : The voice of Madhesh - रोगभन्दा पनि भोकबाट मर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन : अजय कुमार गुप्ता
० कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गौर नगरपालिका के गर्दैछ ?
— कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबभन्दा बढी गर्ने नै स्थानीय तह हो । गौर नगरपालिकाले चैत महिनादेखि नै कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि हुन सक्ने जति उपायहरु छन्, ती कुराहरु गर्दै आएको छ । नगरपालिकाले जनचेतना फैलाउने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने, भारत वा अन्य मुलुकबाट आएका नेपालीहरुको चेकजाँच गरी व्यवस्थितरुपमा राख्ने, सीमामा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने लगायतका कामहरु सुरुदेखि नै गर्दै आएको छ ।
० तर पनि संक्रमण नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन नि ?
— संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका उपायहरु अपनाउँदा पनि नियन्त्रणमा नआउनुका धेरै कारणहरु छन् । नगरपालिकाले मात्रै चाहेर यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्नु मुर्खतापूर्ण कुरा हो । यसका लागि सबभन्दा पहिला आमजनता आफैमा सचेत हुनैपर्छ । कमसेकम भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, पटक–पटक साबुन पानीले हात धुने जस्ता कुराहरु मान्छेले आफै गर्नुपर्छ । गौर नगरपालिका भारतको सीमासँग जोडिएकोले स्थानीय प्रहरी प्रशासनबाट कडाई हुँदा पनि ओहोर–दोहोर हुने कार्य पूर्णरुपमा बन्द भएको छैन । छिमेकी भारतमा कोरोना संक्रमण कुनाकाप्चासम्म फैलिएको छ, त्यसले आवत–जावत हुँदा संक्रमण फैलिरहेको छ । सुरु–सुरुमा हामीले भारतमा काम गर्ने नेपालीहरु आउँदा क्वारेन्टाइनमा राखेर, पीसीआर टेष्ट गरेरै घर पठाउँथ्यौं । त्यो बेला कोरोना संक्रमण समुदायमा गएको थिएन । तर, अहिले कोरोना समुदायमा पनि प्रवेश गरिसकेकोले अलिकति अवस्था अप्ठ्यारो देखिएको छ । गौर नगरपालिकाले संक्रमण रोकथामका लागि हरेक प्रयासहरु गरिरहेको छ । हामीले होम आइसोलेसनको पनि व्यवस्थापन गरेका छौं । आजको मितिसम्म गौर नगरपालिकामा जम्मा दुई जना मात्रै कोरोना संक्रमित छन् । बाँकी सबै उपचारपछि निको भएर घर गइसकेका छन् ।
० भनेपछि गौर नगरपालिकामा कोरोनाको भयावह अवस्था छैन ?
— हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग गर्दा केही संक्रमितहरु फेला परेका थिए । तर सबै निको भइसकेका छन् । अहिले संक्रमित घटेका छन् । धेरैजसो अवस्थामा कोरोना छ कि छैन भन्ने थाहा पनि हुँदैन । जाँच गराएका पछि मात्रै थाहा हुन्छ । हामीले कोरोनाको लक्षण देखिनेहरुलाई टेष्ट गराउनुस् भनिरहेका छौं । संक्रमित भएका मान्छेहरुको कन्ट्याक्टमा आएकाहरुको टेष्ट गराउँछौं । साथसाथै अन्य कोही व्यक्ति इच्छुक छन् भने उनीहरुको पनि टेष्ट गराउँछौं । समग्रमा भन्नुपर्दा गौर अहिले कोरोनाको उच्च जोखिममा छैन । हालसम्म हामीले नियन्त्रणमा राखेका छौं । पहिला उच्च जोखिममा थियो । तर, विस्तारै–विस्तारै अब कोरोना संक्रमितको संख्या कम हुँदै गएको छ । तर कोरोनाको कुनै ठेगान छैन । कुन बेला कताबाट आउँछ भन्न सकिन्न । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को निर्देशनअनुसार मापदण्ड पालना गरेन भने संक्रमण बढ्न पनि सक्छ ।
० आगामी दिनमा संक्रमण अझ नबढोस्, त्यसका लागि पूर्वतयारीहरु के–के गर्नुभएको छ ?
— कोरोना भाइरसबाट मुक्ति पाउन सकिने अवस्था छैन । किनभने अहिलेसम्म यसको कुनै भ्याक्सिन आएको छैन । जबसम्म यसको भ्याक्सिन आउँदैन तबसम्म यो महामारी नियन्त्रण हुनेवाला पनि छैन । तर अब जनजीवन पनि सहज हुनुपर्छ । अहिले सबै क्षेत्र बन्द भएर भोकमरीको अवस्थामा पुग्ने परिस्थिति बन्दैछ । संक्रमणको जोखिम छँदैछ । त्यसैले अब हामी कोरोना सँगसँगै जिउनुपर्छ । लकडाउन वा निषेधाज्ञा मात्रै गरेर कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सक्छौं भन्ने छैन । केही हदसम्म कोरोना चेनलाई तोड्न सक्छौं । जबसम्म आमनागरिकले आफै सचेत भएर मापदण्ड पालना गर्दैन तबसम्म नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन । हामीले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयदेखि लिएर निजी विद्यालयहरुसमेतमा सचेतनाका कार्यक्रमहरु गरेर बच्चाहरुलाई प्रशिक्षित गरेका छौं । गौर नगरपालिका वा मैले मात्रै चाहेर हुँदैन । यसमा सबैको साझा प्रयास हुनुपर्छ । नियन्त्रण गर्ने हाम्रो वशको कुरा होइन, तर जोखिमलाई न्यून गर्न सक्छौं ।
० गौरमा निषेधाज्ञा कहिलेसम्म जारी राख्ने ?
— हामीले अहिले भाद्र २४ गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका छौं । तैपनि विहान ७ बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म अति आवश्यकीय, खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीहरुका लागि खुल्ला गरेका छौं । यसैगरी, बैंकहरु पनि बिहान ७ बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म खुलिरहेको छ । सरकारी कार्यालयहरु, सार्वजनिक सवारी साधनहरु बन्द छन् । कमसेकम निर्माण कार्य सुचारु हुँदा मजदूर तप्काका मान्छेले काम पनि पाउँछन् र हातमुख जोड्ने समस्या पनि आउँदैन । तर, अब हामी विस्तारै–विस्तारै खुकुलो बनाउँदै जान्छौं । बन्दाबन्दी मात्रै गरेर मान्छे रोगभन्दा पनि भोकबाट मर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । जनजीवनलाई सहज बनाउँदै कोरोनासँग लड्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।